ငါကပုံမှန်ပင်, ငါ့ကိုအပျြောအပါးပေးသည်ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ဖြစ်ကြောင်းကို? ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားတူတစ်ခုခုမှာခံစားရသူသာလူတစ်ဦး Am? ငါခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူလိင်အတွက်ရေကူးကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မခံစားမိဘယ်လိုနေမကောင်းသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်သနည်း ငါတို့အဘို့အလိင်အကွံဉာဏျစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်သို့မဟုတ်တကယ်တစ်ဦးချင်းအကြံပေးအဖွဲ့စွမ်းရည်သကဲ့သို့ငါ့ကိုမှထွက်မတ်တပ်ရပ်နိုင်သလော
ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုအတ္တအပေါ်အတော်လေးခက်ခဲတဲ့ပွေးနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအတွက်ကိုမီးရှို့နိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်မကြာခဏ Objektophilie နှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, မည်သည့်လူမှုရေးနားလည်မှုတဘက်, ပကတိပွငျလူအဖြစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိသည်, အထူးသဖြင့်အခါ။
သို့သော်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူဤအလွန်အမင်းပုဂ္ဂလိကနှင့်အလွန်အမင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများအကြောင်းပြောဆိုရပါမည်မဟုတ်နိုင်သလဲ ထိုအသင်မည်သို့အားဖြင့်မျက်နှာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကယ်တင်နိုင်သလော အဖြေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းပြည့်အတိုင်ပင်ခံမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှုထောင့်၌တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလိင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးအထူးကုကဆောင်ရွက်သည့်အခါအမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်နှင့် Academic လေ့ကျင့်သင်ကြားစိတ်ပညာရှင်နှစ်ဦးစလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လျှို့ဝှက်ဖို့ဘာသာရပ်များမှာကြောင့်ဖြစ်သည်။
တစ်ကောလိပ်ဒီဂရီမဟုတ်ရင်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရည်အချင်းများတငျပွနိုငျမဟုတ်သလို, တထိခိုက်မခံတဲ့ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. သံသယဖြစ်သင့်ကြောင်း Self-အဖြစ်ခန့်အပ်အတိုင်ပင်ခံအခါ။
ထိုအရိုးရှင်းစွာပဲ "စိတ်ပညာရှင်" သူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်သူကိုပံ့ပိုးပေးနဲ့အတူကြီးမြတ်ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီအမည်ဖြင့်တရားဝင်ကာကွယ်ပေး, ဒါကြောင့်သူတို့မဆိုထို့ကြောင့်အလိုတော်မှာခြုံငုံနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမှာတတ်နိုင်သမျှသည်မဟုတ်လို့ပဲ။ သည် "စိတ်ပညာရှင်" မူရင်းမနှင့်စစ်မှန်သောတက္ကသိုလ်ဒီဂရီဆဲတာဝန်လေ့ကျင့်ရေးလက်မှတ်သယ်ဆောင် အကယ်. နိုင်သည် - ဝေးလက်ညှိုးကိုကျေးဇူးပြုပြီး!
X-Files အကြံဉာဏ်ကို "Trust မှအဘယ်သူမျှမတစျဦးက" ပေါ်တွင်ကားအဘယ်သူ, တယ်လီဖုန်းများ၏အမည်မသိအခွင့်အလမ်းများကိုတန်ဖိုးထားသို့မဟုတ်အလွန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့သင်ကအမည်မသိ Telefonweg သို့မဟုတ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အွန်လိုင်းတွင်ကျယ်စွာမှတဆင့်အရည်အချင်းပြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းရနိုင်သည်။
အဆိုပါ layman တစ်ဦးအရည်အချင်းအကြံပေးအဖွဲ့န်ဆောင်မှုတစ်ခုလှနျးလှသောနှင့်စော်ကားသော 0190 rip-off ခွဲခြားရန်အဘို့အကံမကောင်းစွာကြောင့်ဤနေရာတွင်အလွန်ခက်ခဲသည်။ တစ်ဝက်ကဒီမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ချင်တယ်သူများသည် "ဟုအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း" အတွက် google, ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှမ်းမှတဆင့်ရှိပါတယ်ရလဒ်များအဆိုပါစာရင်း check လုပ်ပေးပါတယ်။
၏သင်တန်း, စပ်စုဦးချိုအားဖြင့်နွားကို ယူ. , အသက်ရှည်စိတျဆောင်ပုဒ်နှင့်အထူး drives တွေကိုမညီကြောင်းမဟုတ်ဘယ်မှာသင့်လျော်တဲ့အင်တာနက်ကဖိုရမ်တစ်ခုပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ ဘယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အမည်ဝှက်တတ်ပြီးပေါင်းစပ်။ နှင့်အဟောင်းကျင့်ဆိုးအသစ်မိတ်ဖက်အားဖြင့်အချို့သောကံနှင့်အတူသိရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။